गर्भावस्थाका केही रोचक धारणा - ज्ञानविज्ञान
अर्को धारणा के पनि छ भने यदि पेटमा बच्चा भएको बेला महिलाले नूनिलो नमकिन खाने इच्छा गरिन् भनेे बुझ्नुपर्छ की उनको पेटमा छोरा छ । यदि पेटमा छोरी भएमा महिलाले गुलियो कुरा खाने इच्छा गर्छिन् । तर यसको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । अर्को रोचक जनविश्वास के छ भने जुन गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा छातिमा जलनको महसुस गर्छिन् उनको पेटमा रहेको बच्चाको टाउकोमा निकै राम्रो कपाल पलाउँछ । तर विज्ञहरुले भने गर्भवती महिलामा छातिको जलनको समस्या सामान्य रहेको र यसको सम्बन्ध बच्चाको कपालसँग नरहेको बताउँछन् ।
कतिपयले गर्भवती महिला उत्तानो परेर सुत्दा गर्भको बच्चालाई असर पुग्छ भन्ने धारणा राख्छन् । तर विज्ञहरुका अनुसार उत्तानो परेर सुत्दा बच्चालाई कुनै असर पुग्दैन । बरु पेट थिचिने गरी घोप्टो परेर चाहीँ सुत्नु हुँदैन । धेरै मानिसमा के अन्धविश्वास पनि छ भने गर्भावस्थाको बेला सम्भोग गर्दा गर्भको बच्चालाई असर पुग्छ । तर विज्ञहरुले भने गर्भावस्थामा सेक्स गर्दा गर्भको बच्चालाई असर गर्ने नभै झन रोगबाट बचाउने बताउँछन् ।
Topics #गर्भावस्था #रोचक धारणा #समाज
Don't Miss it यस्ता छन्, कुहिनो र घुँडामा हुने कालोपन हटाउने घरेलु उपाय
Up Next गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिनामा सुरक्षा नअपनाए मृत शिशु जन्मिने सम्भावना
यी सामान्य गल्ती गरिरहनु भयो भने समय अगावै बुढेसकालले छुनेछ तपाइलाई
बुढेसकाल समय अनुसार सबैलाई हुन्छ । उमेर ढल्कदै गए पछि बुढेसकाल लाग्दै जानु अस्वभाविक होइन तर हाम्रो शारिरिक बनावट तथा…
के खाँदा झर्छ कपाल ? जन्नुहोस
१. आलूः यसमा स्टार्चको मात्रा अत्यधिक हुन्छ जसले इन्सुलिनको स्तरलाई बढाउँछ र कपाल धेरै झर्छ । २. पिज्जाः यो खाँदा…